अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेको संख्या बढ्दो
चितवन – प्रसूति सेवामा नेपालमा नै अग्रणी मानिएको भरतपुर अस्पतालमा बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या बढ्दो छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १३ हजार ५४५ महिलाले अस्पतालमा बच्चा जन्माएका हुन् । तीमध्ये १३ हजार ३२७ जीवित बच्चा जन्मेका थिए भने बाँकी मृत अवस्थामा जन्मेका थिए ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार हरेक वर्ष सुत्केरी हुने आमाको संख्या बढ्दो छ । प्रसूति गृहपछि सबैभन्दा बढी बच्चा यही अस्पतालमा जन्मने गर्दछन् । अघिल्लो आवमा १३ हजार ५२५ महिलाले बच्चा जन्माएका थिए । आव २०७३/७४ मा यो संख्या १२ हजार ९८० रहेको थियो ।
गत आवमा बच्चा जन्माउनेमध्ये ४ हजार ६७ जनाको शल्यक्रिया गरिएको थियो भने अन्यको सामान्य ढंगबाट सुत्केरी गराइएको पौडेलले जानकारी दिए । विगतका वर्षमा पनि यही अनुपातमा शल्यक्रिया हुने गरेको छ ।
अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या धेरै रहेको छ । विभिन्न कारणले आमा र शिशुको उपचारका क्रममा मृत्यु हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार गत आवमा ४ जना आमाको मृत्यु भएको थियो भने अघिल्लो आवमा यो संख्या ५ रहेको थियो ।
जन्मिएपछि गत वर्ष ३१ जना शिशुको निधन भएको थियो । उनका अनुसार अघिल्लो आवमा यो संख्या २७ रहेको थियो ।
अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विभागका प्रमुख डा. सुनिलमणि पोख्रेलका अनुसार ठूलो संख्यामा प्रसूति हुने क्रममा विभिन्न कारणले आमा र बच्चाको निधन हुने गरेको छ । यो संख्या राष्ट्रिय रुपमा कम रहेको र अझै तल झार्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।
अस्पतालमा रहेका पुराना, अनुभवी र दक्ष चिकित्सक एवं नर्सिङ कर्मचारीहरुका कारण सबै तिरबाट बच्चा जन्माउनका लागि यहाँ आउने गरेको पोख्रेलको भनाइ छ । बच्चा जन्माउने काममा ८५ प्रतिशत भूमिका नर्सिङ कर्मचारीको हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
भरतपुर अस्पतालमा ३५ वर्षदेखि प्रसुती विभागमा काम गरेका अनुभवी कर्मचारी रहेका छन् । पोख्रेलका अनुसार प्रसूति कक्ष (लेवर रुम) मा १९ जना नर्सिङ कर्मचारी रहेको र उनीहरु चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुने गरेका छन् ।
अस्पतालमा १० जना प्रसूतिका विशेषज्ञ चिकित्सक रहेका छन् । पोख्रेलका अनुसार छिमेकी मेडिकल कलेज, क्यान्सर अस्पताल र अन्य अस्पतालहरुका चिकित्सकले पनि आफ्ना आफन्तहरु प्रसूति गराउन भरतपुर अस्पताल नै ल्याउने गर्दछन् ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले दक्ष जनशक्ति, चौबिसै घण्टा चिकित्सक सहितको सेवा, बिरामीलाई दिइने प्राथमिकता, निःशुल्क प्रसूति सेवा लगायतका कारण यो अस्पतालमा प्रसूति गराउनेको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको बताए । अस्पतालमा छुट्टै सुविधासम्पन्न प्रसूतिगृह निर्माण गरी शिशु सघन उपचार कक्षको क्षमता विस्तार गर्न आफू लागिपरेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. तिवारीले बताए ।
अस्पतालमा नै देशभरका नर्सलाई तालिम दिने केन्द्र रहेको भन्दै उनले दक्ष नर्सिङ कर्मचारीका कारण प्रसूतिमा थप सहजता आएको बताए । निजीमा प्रसूति गराउँदा ठूलो रकम खर्च हुने भएपनि सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क प्रसूति सेवा र शिशु सघन उपचार कक्षमा सेवा प्राप्त हुने भएकाले सबैलाई सहजता मिलेको उनले बताए ।
निजी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेर बच्चा झिक्न ५० हजार रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गर्दछ । सरकारी अस्पतालमा प्रसूति गराउँदा यहाँको जन्म प्रमाणपत्रपछि सम्म काम लाग्ने र भरपर्दो हुने गर्दछ ।
महिलाले सुत्केरी हुनुअघि कम्तीमा ४ पटक गर्भ परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षणलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नका लागि अस्पताल प्रशासन लागिपरेको उनको भनाइ छ । नयाँ भवन भएसँगै सबै व्यवस्थित हुने उनले जानकारी दिए ।
अस्पतालको शिशु सघन उपचार कक्ष १२ शय्याको मात्र रहेको छ । जसका कारण यहाँ आमा राखेर शय्याको अभावमा शिशुलाई अन्य अस्पतालको शिशु सघन उपचार कक्षमा राख्ने बाध्यता रहेको छ । – नारायण अधिकारी/रासस
यी राम्रा बानीले बदल्नेछ तपाईंको भविष्य
मकै खानुका यी अभुतपूर्व फाइदाः क्यान्सरको खतरा कम,...
अध्ययन भन्छ– धेर भात खाँदा मुटुरोग लागेर मर्ने सम्भ...
रक्सी पिउनुहुन्छ ? यस्ताे हाेला नि कलेजाेकाे हालत
मकै खानुका यी अभुतपूर्व फाइदाः क्यान्सरको खतरा कम, अरु धेरै छन्
उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढे पनि भीडभाड उस्तै, कडा कदम चाल्ने महानगरको चेतानी
एकैदिन १५ सय नेपाली स्वदेश फर्किए
सरकारी चिकित्सक संघमा डा खड्का निर्वाचित
अभिभावकविहीन बालबालिका (तस्वीर)
डब्लुएचओबाट बाहिरिने अमेरिकी निर्णयमा पुनर्विचार हुने टेड्रोसको अपेक्षा
नेकपा पार्टी फुट्दैन, फुटाउन चाहने आफैँ सकिन्छन्- पूर्वमन्त्री तामाङ
सशस्त्र प्रहरीका ९ जनामा कोरोना पुष्टि
माडीका जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- अयोध्यापूरीमा राममन्दिर बनाउनू